USA: Shacab careysan iyo Cunsuriyiinta KKK oo gacanta isula tagay gobalka California [Sawiro] | shumis.net
Home » Layaab » USA: Shacab careysan iyo Cunsuriyiinta KKK oo gacanta isula tagay gobalka California [Sawiro]
USA: Shacab careysan iyo Cunsuriyiinta KKK oo gacanta isula tagay gobalka California [Sawiro]
Tobaneeyo qof ayaa ku dhawaacmay iska horimaad dhexmaray shacab careysa iyo kooxda cunsuriyiinta Maraykanka ee loo yaqaan Ku Klux Klan(KKK) oo doonayey inay banaan bax ka dhigaan gobalka California ee dalka Maraykanka.
Kooxda KKK ayaa qorsheeyey inay socod banaanbax ah ku maraan bartamaha magaalada Anaheim ee gobalka California balse waxaa jidka u istaagay shacab badan oo kasoo horjeeda kooxdan cunsuriyiinta ah, halkaasi ayaa waxaa ka dhacay iska horimaad kadib markii dadweynaha careysan ay weerar ku qaadeen kooxda ka socotay KKK.
Taageerayaasha KKK ayaa la sheegay in qaarkood ay hoosta ku wateen mindiyo isla markaana ay dhaawacyo u geysteen dadkii weerarka kusoo qaaday, sidoo kale Kooxdaasi xubno kamid ah ayaa dhaawacyo soo gaaren kadib markii ay u gacan galeen shacabka kasoo horjeeday.
Booliiska ayaa sheegay inay xabsiga dhigeen ugu yaraan 13 qof oo ka kala tirsanaa labada dhinac.
Dalka Maraykanka ayaa sanadihii lasoo dhaafay kusoo badaneysay xiisada ka dhex taagan dadka madow iyo cunsuriyiinta, waxaana cadaawadan dib usoo nooleeyey dilal badan oo ay booliiska Maraykanka oo u badan Cadaan u geysteen dhalinyaro madow oo qaarkood aan wax hub ah sidan.
Shacabka Madowga oo dilalkan ka gadoodsan ayaa bilaabay Kacdoonka loo yaqaan (Black Lives Matter) oo si weyn looga dareemay magaalooyinka waaweyn ee Maraykanka.
Dhinaca kale kooxda KKK ayaa kamid ah kooxaha ugu caansan ee cunsuriyiinta Maraykanka waxaana la aasaasay sanadkii 1865 waxayna waagii hore lahaan jireen taageerayaal badan oo gaaraya illaa 4 milyan, balse taageerayaashooda xiligan ayaa lagu qiyaasaa 5 illaa 8 kun oo qof, inkastoo ay tiro yaryihiin hadana marar badan bay isku dayaan inay banaanbaxyo ka dhigaan magaalooyinka waaweyn waxayna mar walba caqabad weyn kala kulmaan shacabka kasoo horjeeda.
Title: USA: Shacab careysan iyo Cunsuriyiinta KKK oo gacanta isula tagay gobalka California [Sawiro]